स्वास्थ्य संकटकाल लागु भएमा सरकारको योजनाहरु के के छन् ? – Palika Times
स्वास्थ्य संकटकाल लागु भएमा सरकारको योजनाहरु के के छन् ?
२१ जेठ, काठमाडौँ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको लागि मन्त्रालयको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । ‘आज या भोलिसम्ममा देशमा सक्रिय (निको भएर फर्कीएका बाहेक) केस २ हजार कट्ने सम्भावना छ ।’ ,उनले भने ‘दुई हजार कट्दै गर्दा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तयारीको लागि मन्त्रालयले काम थालेको छ ।’
के छ सरकारको ‘कोभिड–१९ हेल्थ सेक्टर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’मा ?
सरकारले कोभिड-१९ का सक्रिय २ हजार केस पुगेपछि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको मान्ने र त्यसपछि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ । यो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले घोषणा गरेको ग्लोबल इर्मजेन्सी र महामारीका सर्तहरु स्वत: लागु हुनेछन् ।
हेल्थ इमर्जेन्सी लागु भएसँगै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानविय साहायताको लागि आह्वान गर्न सक्नेछ ।
लक्षणविहिन संक्रमतिलाई घर या क्वारेन्टाइनमै राख्ने र लक्षण भएका संक्रमितलाई मात्र अस्पताल ल्याइने छ ।
५ हजार भन्दा बढी सक्रिय केस भएमा स्वास्थ्य समस्या भएका संक्रमितलाई मात्र अस्पताल भर्ना गरिने उल्लेख छ । अन्यलाई भने घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने र समस्या भएमा मात्र अस्पताल ल्याइने छ ।
सबै निजी अस्पताल र त्यहाँका जनशक्ति सरकारले चाहेअनुसार परिचालन हुन सक्ने छ ।
आरडिटिबाट ‘मास सक्रोनिङ्ग’ गरिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य आपतकालिन किट होम आइसोलेसनमा हुनेलाई उपलब्ध गराइने छ ।
होटलहरुबाट उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुकोलागि खाना व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका स्थानकोलागि टेलिभेडिसिन सेवा दिने उल्लख छ । यदि १० हजार भन्दा माथि संक्रमित भएमा विपत जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन ऐन अनुसार आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्ने सो निर्देशीकामा उल्लेख छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण बाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो
निसर्ग चक्रबातको कारण नेपालमा अबको ३ दिन सम्म पानि पर्न सक्ने : मौसमविद